Blockchain News 30 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 30, 2018 admin
Cryptocurrency exchange ukuba bayeke ishishini umthengisi ngu Regulator German
German Financial okugada Authority (BaFin) iyalele Crypto.exchange GmbH, a exchange Berlin-based, ukuba ngoko nangoko esebenza njenge kumthengisi zemali.
Umyalelo wakhutshwa emva exchange zipapashwe kwi website yayo, btc-now.de, ukuba babethengisa bitcoins uMthengi nangaso euro bathengise ngazo kwi-stock exchange, uthi BaFin kwingxelo. Ingabinani ibango ixabiso lentengo iya kugqithiselwa abatyali mali ngaphakathi 30 imizuzu, yongeza.
Ngokuka BaFin, ishishini uthumo mali isetyenziswa Crypto.exchange GmbH akukho eligunyaziswe umlawuli. I-egadile zemali wathatha isigqibo emva abasebenzisi bathi abazange bafumane naluphi na imali cryptocurrency ukuba watshintshelwa beqinile, Bloomberg States.
oluncedisayo Swiss Sberbank iya athengise cryptocurrency
Isakhiwo ezizalwa Sberbank eSwitzerland lunghiselela ku ukuqalisa norhwebo cryptocurrency kubathengi, wathi Andrei Shemetov, uSekela Mongameli Sberbank kunye nentloko kurhwebo lwehlabathi utyalo – Sberbank CIB. Esi sisihlandlo sokuqala kukho inkonzo elolu hlobo uyinikwe yi ziibhanki Russian.
“Le mveliso kuyingozi kakhulu, i hexa likhulu kakhulu, ngoko asiyi kubonelela ngezi nkonzo ukuba nobunzima ngokubanzi lwabathengi… ngoku silungiselela yonke izibonelelo ukuze uqale abonelela ngeenkonzo igatha lwakwa- Swiss… Sakha setup yorhwebo epheleleyo ukuze siyakwazi ukuvula indawo yethu kwaye yokunika iinkonzo zabaxumi, yiyo i, ukuthenga nokuthengisa kubathengi.”
Samsung iqalile isigaba imveliso chips .GOKO ukuba imigodi cryptocurrency
i Bell (website iindaba Korean) ingxelo yokuba Samsung iye yaqala ukuvelisa chips imigodi Bitcoin kule nyanga.
Le ngxelo ithi Samsung ukuba utyikitye isivumelwano nenkampani iintsimbi Chinese ezinxulumene nemigodi Bitcoin, kwaye yaqala imveliso sele phezu chips – ebala esemthethweni Samsung ingubani.
Liqhubeka ukuba bathi Samsung ukuba lwagqitywa uphuhliso .GOKO semiconductors for Bitcoin imigodi kunyaka ophelileyo.
Iziveliso chips .GOKO ukusuka Samsung
Samsung waqala kwenze ...
Bill Gates uthi Bitcoin i tech inqabile yabangela ukufa kwabantu ngendlela ethe ngqo
Xa Reddit AMA kwi T ...
CEO Salesforce yazisa izicwangciso lwemveliso blockchain
Salesforce is workin ...
Post Previous:Blockchain News 29 EyoMqungu 2018
Post Next:Indlela ukuba umqambi blockchain